Isu tinogona kuona hutano hwebhatiri redu uye kugadzirisa mashandiro mune ramangwana kugadzirisa | IPhone nhau
Apple inoda kupedza gakava pamusoro pemabhatiri uye iyo inonzi yakarongwa kufuratira iyo inoita kuti zvishandiso zvavo zvidzikire kana vaona kuti bhatiri ravo rakadzikiswa Iyi nharo yekukakavara yakave nemhedzisiro zvekuti mukufamba kusingawanzoitika mukambani, Tim Cook pachake akataura izvozvo mune inotevera inodzokorora mushandisi achakwanisa kusarudza zvekuita.
Ziva hutano hwebhatiri redu uye sarudza kana tichida kana kwete yedu iPhone inogadzirisa kumhanya kwayo zvichienderana nemamiriro ebhatiri redu, chichava iwo maficha matsva anosvika mwedzi unouya mushanduro nyowani yeIOS inotanga kuwanikwa kune vanogadzira. Isu tinokuudza iwe nezve kubvunzurudzwa kwakapihwa ABC.
Uku kubvunzurudzwa neAmerican ABC mune iyo musoro weApple inotaura nezve yake nyowani nzira yekudyara muUnited States, uyezve haataurewo nezvehurongwa hwekambani maererano nenyaya yayo inopokana kwazvo mumakore mashoma apfuura: mabhatiri uye izvo vazhinji vanofunga "zvakarongwa kusakwana." Mune yakaipa nzira yekutaurirana Apple yakabvuma kuti yakadzora pasi michina yayo kuchengetedza yakanaka mushandisi ruzivo apo mabhatiri akange atove kukuvadzwa, kudzivirira kudzivirirwa kusingatarisirwe. Iyi sarudzo, iyo mukufunga kwevakawanda ndeyechokwadi asi iyo isu tese tinofungawo kuti yaifanirwa kunge yakaziviswa neimwe nzira kune vashandisi, yakatungamira mukuteedzana kwekushoropodza uye zvichemo izvo zvakamanikidza kambani kuenderera mberi.
Tim Cook akavimbisa kuti mwedzi unotevera kuvandudzwa kweIOS kunotibvumira kuti tizive mamiriro ebhatiri redu, kuitira kuti mushandisi azive kana inguva yekuchichinja kana kwete. Rangarira kuti mabhatiri eApple akagadzirirwa angangoita mazana mashanu macirculi uku achichengetedza iwo mashoma mashandiroKubva ipapo, kugona kwayo kunodonha kudzamara kwasvika panguva yekuti kushanda kwayo hakuchakwanise. Izvi zvinowanzoitika mushure memakore maviri ekushandisa kwechigadzirwa, kunyangwe zvichizosiyana nemabatiro atinoitarisira uye nemashandisiro atinoita.
Pamusoro peiri basa nyowani, rinozobvumidza mushandisi kusarudza kana achida kuti iPhone yake igadzirise mashandiro ayo zvinoenderana nemamiriro ebhatiri, kana kana, pane kudaro, achida kuchengetedza kwakanyanya kushanda zvisinei nedunhu bhatiri. Ese maviri matsva anosvika mumwedzi waKukadzi uye anozozviita kutanga mushanduro nyowani yevanogadzira, senguva dzose. Zvingangodaro, Apple ichaburitsa 11.2.5 pakupera kwemwedzi uno waNdira (yatove muBeta 6) uye pamwe iyi nyowani itsva ichave yatosvika iine zita rekuti 11.3.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Tichakwanisa kuona hutano hwebhatiri redu uye kugadzirisa mashandiro mune ramangwana kugadzirisa
Zvakanaka. Zvinoita kunge ndezvechokwadi kwandiri, kunyangwe saka ini ndisingazvinzwisise chaizvo, ko iyo gehena ndiyo yakaderera nzira yekushandisa izvozvi ??? zvakadaro…
Ndinovimba zvakadaro, nekuti neazvino maIOS anovandudza ari kuramba achiwedzera uye achifanirwa kunge asina kukwana mashandiro zvine chekuita nebhatiri.
Vanyori veiyi (uye imwe) webhusaiti vanoramba vachidaro sei mukudzivirira mafungiro ako kuti hachisi chinhu chakarongeka chekare. Zviri pasina kupokana kuti dai asina kugutsikana kukuru ingadai iri zano rine hutsinye maererano nekutengesa kutsva kweApple sezvo vashandisi vasingaverengeke vaizoenda kunochinjana yavo inokosha, inodhura uye ine simba iPhone kune nyowani nekuti izvo zvainonoka uye Hapana chinopfuura kubva muchokwadi. Iwo TOP nhare, saka yavo Hardware iri kupfuura kugadzirira kumhanya zvakanaka kunyorera kweanopfuura makore maviri ...
Kunyanya, mira 'kupa kune vamwe' izvo 'zvinofungidzirwa' kushaya nguva uye kutanga kuzvibvuma uye kuzvitora, zvave uye zvichazove uye zvaive chokwadi chaicho.
IPhone 8 yekugadzira inononoka mushure memazororo eKisimusi